कोरोना भाइरस सम्बन्धी भ्रम र यर्थाथ (भाग–१४) – Himal FM 90.2 MHz
कोरोना भाइरस सम्बन्धी भ्रम र यर्थाथ (भाग–१४)
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका– ७ खोटाङ
सवाल – विश्वमहामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण न्यूनिकरण गर्नेएक विधि सेनिटाइजर भनिन्छ, गाउँलेहरुले कसरी प्रयोग गर्ने, र यसको अलवा अरु विधि छन् की ?
डा. शैलेश श्रेष्ठ
जिल्ला अस्पताल, खोटाङ
जवाफ –विशेष गरि चिकित्सकहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि साबुन पानी र सेनिटाइजर नै प्रयोग गर्ने भनेर भनिन्छ ।
अन्य जडिबुटीहरु,गोल्व्स लगायत अन्य प्रयोग गर्नका लागि प्रमाणित भएको छैन् । गाउँ घरमा प्रयोग गर्ने भनेको साबुन पानी नै हो । किनभने गाउँ घरमा प्रशस्त समय हुन्छ, पानी हुन्छ तर अस्तपाल तथा अन्य कार्यालय तिर सेनिटाईजर प्रयोग गर्ने हो,जहाँकम समय हुन्छ ।
अर्को सवाल – क्वारेन्टीन र आइसोलेशन वार्ड भनिन्छ, कस्तो कस्तो विरामीहरुलाई राखिन्छ ?
स्वास्थ्य कार्यालय, सोलुखुम्बु
जवाफ – क्वारेन्टीन भनेको कोरोना भाइरस संक्रमण देशबाट आएका व्यक्तिहरु, रोग पहिचान नभएका तर शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई राख्ने ठाउँलाई क्वारेन्टीन भन्ने गरिन्छ ।
क्वारेन्टीनमा शकास्पद व्यक्तिहरुलाई राखेर निगरानी गरिन्छ । क्यारेन्टीन घर, होटल, कार्यालय स्वास्थ्य संस्थाको कुनै एक कोठा पनि हुनसक्छ । क्वारेन्टीनमा बसेको व्यक्तिअर्को व्यक्तिसंग सम्पर्कमा आउनुहुंदैन ।
आफुले प्रयोग गर्ने सामानहरु भिन्नै हुनुपर्दछ । आफु सुत्ने र घुम्ने स्थानपनि कुनै निश्चित तोकिएको स्थानमा हुनुपर्दछ । क्वारेन्टीन फराकिलो कोठा छ भने दुरी कायमगरि एक भन्दा बढि वेड र व्यक्ति राख्नपनि सकिन्छ । तर,आइसोलेशन भनेको भाइरस संक्रमित व्यक्ति अथवा रोगको लक्षण देखा परिसकेको व्यक्तिलाई छुट्टै कोठामा राखेर उपचार गरिने वार्ड आइसोलेशन भनिन्छ ? भाइरस संक्रमित व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई सो भाइरस नसरोस भनेर सावधानी पूर्वक बेग्लै राखिन्छ ।
त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गर्ने वेडमा अक्सिजन, आइसियु तथा आवस्यक परेको समयमा भेण्टिलेटरको समेत व्यवस्थापन भएको हुनु पर्दछ । त्यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरुले समेत विशेष सावधानी अपनाउनु जरुरी हुन्छ ।
स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई समेत संक्रमण फैलन नदिनका लागि गुणस्तरिय सेनीटाइजर, ग्लोव, मास्क, चस्मा तथा पिपिइको व्यवस्थापन हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
तपाईसंग पनि कोरोना भाइरस सम्बन्धी कुनै द्धिविधा र जिज्ञासा छन् भने हामीलाई ९७४३०९४८३३ मा हरेक दिन ९ बजे देखी १० बजेसम्म टेलिफोन गरी आफ्ना जिज्ञासा रेकर्डगराउन सक्नु हुनेछ । तपाईको जिज्ञासा मेटाउन हामी विभिन्न डाक्टरको सहयोग लिनेछौँ ।